मङ्सिर लाग्यो बिहे गर्ने सुरमा हुनुहुन्छ भने यो अवस्य पढ्नुहोस ! - Himali Patrika
मङ्सिर लाग्यो बिहे गर्ने सुरमा हुनुहुन्छ भने यो अवस्य पढ्नुहोस !
हिमाली पत्रिका १ मङ्सिर २०७६, 4:46 pm
एजेन्सी, मङ्सिर महिना बिहेको महिना धेरै जोडी हरु धेरै परिवार हरु बिहे बन्धनमा बाधिने महिनाको रुपमा चिनिन्छ यो महिना धेरै को जोडी जम्ने धेरैको जोडी छुट्टिने महिनाको रुपमा पनि चिनिन्छ, के तपाइँ बिहे गर्ने उमेरमा पुग्नुभयो ? यदी यो मंसिरमा बिहे गर्ने सुरमा हुनुहुन्छ भने अवस्य यो पढ्नुहोस ।
विवाहको सिजन प्रारम्भ हुँदैछ । मंसिर लागेपछि विवाहको लगन पनि प्रारम्भ हुन्छ । त्यसैले आज हामी विवाहसँग सम्बन्धित एउटा रोचक विषयमा चर्चा गर्दछौं । प्रसंग हो, विवाहका कस-कसलाई बोलाउने भन्ने बहस अथवा विवाहको निमन्त्रणा कार्डमा बोलाइने व्यक्तिहरुको सूची कसरी तयार गर्ने भन्ने । जुन घरमा वैवाहिक समारोह आयोजना गर्न लागिएको हुन्छ । उक्त घरमा विवाहको निमन्त्रणा कार्डको लिस्ट बनाउने बेला प्रायः एउटा बहस हुने गर्छ । कसलाई बोलाउने तथा कसलाई नबोलाउने ?
यदि तपाईंको परिवार ठूलो छ भने एकसयदेखि डेढ सय जना त परिवार भित्रैका हुन्छन् । यस्तो बेलामा जब वैवाहिक समारोह कुनै अर्कै शहरमा हुँदैछ भने निम्तालुहरुको सूचीबाट नाम काट्नु निकै निरासाजनक क्षण हुन पुग्छ । एक जना ‘वेडिङ प्लानर’ले विवाहका निम्तालुहरुको सूचीलाई कसरी घटाउने ?
वर्गीकरण अनुसार छनोट
आफन्तहरुको सूची बनाउने बेलामा नै उनीहरुलाई यसरी विभाजित गर्नुपर्छ । तपाईंको अति नजिकको परिवार, नजिकका आफन्त तथा टाढाका आफन्त । टाढाका आफन्तको परिवारका सबै सदस्यहरुलाई बोलाउनु अनिवार्य छैन । त्यो परिवारबाट तीनै व्यक्तिलाई मात्र बोलाउनुपर्छ । जोसँग तपाईं सधैं सम्पर्कमा रहनुहुन्छ ।
जसले तपाईंलाई बोलाएका छन्
अब के कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ भने तपाईंलाई क-कसको विवाहमा बोलाइएको थियो । अथवा त्यस्ता व्यक्तिहरु को-को हुन् । जसले आफ्नो घरको विवाहमा तपाईंलाई नबोलाउँदा तपाईंलाई दुःख लाग्न सक्छ । त्यस्ता नामहरु उक्त सूचीमा समावेश गर्नैपर्छ । जोसँग तपाईं भविष्यसम्म पनि सम्बन्ध बनाइरहन चाहनुहुन्छ । उनीहरु वास्तवमै महत्वपूर्ण व्यक्तिहरु हुन्छन् ।
एक वर्षको समय लिनुपर्छ
परिवारका सदस्यहरुका अतिरिक्त तपाईं आफ्ना साथीभाइ तथा नियमित भेटघाट भइरहने छरछिमेकका सदस्यहरुलाई पनि विवाहमा बोलाउन चाहनुहुन्छ भने आफ्ना नजिकका साथीहरुलाई गेस्ट लिस्टमा अवश्य समावेश गर्नुपर्छ । जसलाई तपाईं नियमित भेटिरहनुहुन्छ, उनीहरुलाई पनि निम्तालुको सूचीमा समावेश गर्नुपर्छ । यदि तपाईंको मित्रता भएको एक वर्ष पनि पुगेको छैन भने उनीहरुलाई नबोलाए पनि हुन्छ । जोसँग लामो समयदेखि कुनै सम्पकै भएको छैन । उनीहरुलाई पनि आफ्नो घरको वैवाहिक समारोहमा नबोलाउँदा फरक पर्दैन । आफ्नो घरको वैवाहिक समारोहमा उनीहरुलाई नबोलाउँदा केही बिग्रँदैन ।
केही व्यक्तिहरुले आफ्नो परिवारका साथ-साथै आफ्नो नातेदारहरुलाई समेत विवाहमा लिएर आउँछन् । यदि त्यस्तो भयो भने तपाईंका पाहुनाहरुको गन्ती तथा बाँकी कुराहरु पनि बिथोलिन सक्छ । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई आमन्त्रण गर्ने बेला केवल त्यो व्यक्तिको नाम मात्र कार्डमा लेख्नुपर्छ । जसलाई बोलाउन चाहनुहुन्छ, स-परिवार लेख्ने गल्ती गर्नुहुँदैन ।
वैवाहिक समारोहको सबैभन्दा अनिवार्य कुरा के छ भने उक्त दिन तपाईंका आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरु तपाईंसँगै हुनुपर्छ । त्यसपछि ती व्यक्तिहरु महत्वपूर्ण हुन्छन् । जसले तपाईंलाई मन पराउँछन् अथवा तपाईंका शुभचिन्तकहरु हुन्छन् । ती व्यक्तिहरुको पहिचान गर्नुपर्छ । जो भएनन् भने तपाईं निराश अथवा उदास बन्नु हुनेछ । ती व्यक्तिहरुलाई तपाईंको घरको विवाहमा बोलाउनैपर्छ । बरु बाँकी अनावश्यक नाम हटाउन सक्नुहुनेछ ।